नयाँ कार किन्ने हो ? २५ लाख भन्दा कम मूल्यमा उपलब्ध छन् ५ कम्पनीका यी ५ कार | Automotive News Nepal
नयाँ कार किन्ने हो ? २५ लाख भन्दा कम मूल्यमा उपलब्ध छन् ५ कम्पनीका यी ५ कार ४ चैत, २०७६
पहिलो पटक कार किन्नेहरुका लागि इन्ट्री लेवलका कार उपयुक्त मानिन्छन् । नेपाली बजारमा ड्याटसन, सुजुकी, रेनो, हुन्डाई र टाटाका कार इन्ट्री लेवलका लागि उपयुक्त छन् । सस्तो मूल्यमा उपलब्ध हुने यी कार ह्याचब्याक मोडलमा उपलब्ध छन् ।
नेपाली बजारमा पाइने सबैभन्दा सस्तो कार ड्याटसनको रेडी गो हो । यसको मूल्य १९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ छ । त्यसैगरी सुजुकी अल्टो, रेनो क्विड, हुन्डाई स्यान्ट्रो र टाटा टियागो पनि यही सेगमेन्टका लोकप्रिय कार हुन् ।
केही दिन पहिले नाडाले प्रकाशन गरेको मूल्य सूची अनुसार यी कार र तिनको मूल्य यस प्रकार छ ः
ड्याटसन रेडी गोको मूल्य १९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ छ । नेपालमा पायोनियर मोटोकर्पले ड्याटसनको यो गाडी बिक्री–वितरण गरिरहेको छ । ८ सय सीसी क्षमताको रेडी गो पछिल्लो समय निकै राम्रो बिक्री भएको मोडल हो ।
नेपाली सडकमा सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने इन्ट्री लेवल कार हो अल्टो । ८ सय सीसीमा उपलब्ध र विशेष गरी ट्याक्सीको रुपमा बढी प्रयोग भएकाले झन् यसको बिक्री निकै नै राम्रो भएको थियो । नेपाली बजारमा सीजी मोटोकर्पले अल्टो बिक्री–वितरण गरिरहेको छ । यसको मूल्य १८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ छ ।
रेनो क्विडमा १ हजार सीसी क्षमताको इन्जिन छ । नेपालमा एड्भान्स्ड अटोमोबाइल्सले रेनोका गाडी बिक्री–वितरण गरिरहेको छ । यसको मूल्य २३ लाख ९० हजार रुपैयाँ छ ।
हुन्डाई स्यान्ट्रोमा १०८६ सीसीको इन्जिन छ । नेपालमा लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले हुन्डाईका गाडी बिक्री–वितरण गरिरहेको छ । यसको सुरुवाती मोडलको मूल्य २३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ छ । लामो समयदेखि लोकप्रिय मानिएको स्यान्ट्रको उत्पादन बन्द भएर गत वर्ष फेरि हुन्डाईको नयाँ स्यान्ट्रो लन्च भएर आएको छ ।
टाटा टियागोमा १२ सय सीसीको इन्जिन छ । यसको सुरुवाती मूल्य २४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । नेपालमा सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले टाटाका गाडी बिक्री–वितरण गरिरहेको छ ।
यो हो नेपाली बजारकै सबैभन्दा सस्तो कार ड्याटसन रेडी–गो, यस्तो छ मूल्य र विशेषता
ड्याटसन गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक बितरक पायोनियर मोटाकर्पले नेपालको पहिलो अर्...
नयाँ बीएस ६ ड्याटसन गो VS मारुती सुजुकी अल्टो, तुलनात्मक अध्ययन
भारतमा हालै लन्च गरिएको बीएस६ ड्याटसन गोको तुलना मारुती सुजुकी अल्टोसँग हुने गरे...
ड्याटसनले भारतमा लन्च ग-यो बीएस ६ इन्जिनको गो र गो प्लस
ड्याटसन इन्डियाले भारतीय बजारमा नयाँ बीएस ६ एमिसन नर्म्स सहित गो र गो प्लस कार ल...